မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVI | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XLVI
Posted by Kyaemon on May 27, 2017 in Business & Economics, Education, Think Different, Think Tank |4comments
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၄၅ XLV မှအဆက်
ရေကာတာလုပ်ရင် ရေတွေပိတ်လို့ လူတွေငတ်မယ်၊ သေကြေပျတ်စီးမယ်၊
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၁ဝ X
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၁၁ XI
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths # ၁၄ XIV
အချို့ကဒီလိုမြင်တယ်၊ ရေကာတာက ရေကိုအမြဲကာပြီးသိုလှောင်ထားတယ်၊ရေထွက်ပေါက်ရှိတယ်လို့မမြင်ကြပါ၊
ရေတအားကြီးချိန်မှာ ဒီလိုရေကာတာဆည်မျိုးကလဲ ပိုလျှံရေတွေကိုလွှတ်ရတာပါဘဲ၊
ရေတွေတော်တော်လေးနဲ့မထွက်တဲ့ရေကာတာဆည်မျိုးဆိုရင် အဖျက်သမားအတွက် အခွင့်ကောင်းပါဘဲ၊
အကြားအမြင် ဗဟုသုတ နဲသူတွေကို ရှုပ်ထွေးအောင် မွှေနောက်ကြတယ် ကွက်ပြောတယ်၊ထိန်ချန်ပြီးပြောတယ်၊
သူတို့အတွက် ဒီရေကာတာဆည် ပုံစံမျိုးက လွန်စွာမှအလုပ်ဖြစ်ကြတယ်၊
( ရေအားမှလျှပ်စစ်စွမ်းအား ထုတ်တဲ့ရေကာတာကဒီလို ရိုးရိုးဆည်ပုံစံလိုမှမသွားပါ)
လူအချို့ကဒီပုံကို “လည်း” မြင်ကြတယ်
ရေတွေကိုမြင့်တက်လာအောင် တဘက်ကနေ ကာပြီး ကျန်တဘက်ကနေလွှတ်ကာ ရေတွေက ဆက်လက်ပြီး စီးဆင်းကြတယ်၊
ရေကိုအပေါ်ကနေလွှတ်ချမှTurbine တာဘိုင် တွေကိုလည်စေတယ်၊ဒါမှလျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုထုတ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်တယ်၊
အလားတူစွာ လျှပ်စစ်ထုတ်ရေကာတာ က ရေတွေလွှတ်တဲ့အခါမှာ ရေကာတာ အတွင်း ပိုင်းက အမြင့်တခု
ရေလွှတ်ပေါက်တွေရှိတယ်၊အသေ ပိတ်တာမဟုတ်၊ ဧရာဝတီမြစ်ကိုခမ်းချောက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါ၊လုပ်ဘို့လဲမလိုပါ၊
လုံးဝလုံးဝ မှားနေပါတယ်၊မသိမလေ့လာဘဲနဲ့လိုက် “မွှေ”နေတာ၊တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေ၊
Aesop ပုံပြင်မှာ သိုးထိန်းကျောင်းသားကနောက်စရာမရှိ မိမိရဲ့သိုးတွေကို “ဝန်ပလွေ” ကလာ
စွဲနေပြိ “ကယ်ကြပါ အုန်း” ဆိုပြီးရွာသားတွေကိုသုံးခါနောက်ပြောင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ?
တာ ဘိုင် လမ်းကြောင်းကို ဖြတ်ကျော်ကာ ရေလွှတ်ပေါက်ကနေအပြင်ဘက်သို့စီးဆင်းရတယ်၊
ဖေ့ဘုက် FaceBook မှမှတ်ချက်များ
​ပြောဆိုယင်​လုံဝ မမှားဘူး ။ ရပ်ချင်ရပ် မရပ်ရင်ငတ်မှာပေါ့
မြစ်ဆုံလဲပြီးရော လူတွေလဲသေကုန်pပေါ့ မနိုင်ရေးချာမနိုင် ရေကို
အဲဒါကြီးပျက်စီးခဲ့ရင် ဧရာဝတီကြီး မြစ်ဘေးတလျှောက်က မြို ့တွေရွာတွေ
စိုက်ခင်းတွေနဲ့ လူ တိရ စ္ဆာန်တွေ ဆန်တုတ်တိုက် သေကြေပျက်စီးကြကုန်လိမ္မယ် အဲဒီအရေးဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရာ
ဧရာမိခင်​ထိရင်​​တော့မြန်​မာပြည်​ပျက်​ပီသာမှတ်​ ဘယ်​ မှဂရုစိုက်​​နေမှာမဟုတ်​ဘူး ခံရတာ​တွေများလို့
”ကယ်စရာ” လဲ မလိုပါ၊
ကိုယ်ကလဲနားမလည်တာကို မနာလို မလိုမုန်းထားနဲ့မာရ်နတ်တို့လို တောကြောင်တွေကသိရက်နဲ့လိုက်ဖျက်နေတာ။
သွားပုတ်လေလွှင့်လုပ်တာကလွယ်ပါတယ်၊ လျှပ်စစ်ရအောင် တခုခုများ လာလုပ်ပေးမလားပါ၊
လျှော်ရမဲ့အပိုင်းအတွက် တပြားတလေကိုလာပြီး ဝိုင်းစိုက်ထုတ်ပေးမလား? ပေးသနားတော်မူမlလား? ဆိုတာ တခွန်းမှ မ “ဟ” ရဲ ပါလား?၊
နွေရာသီ က ၉၆ – ၁၀၂ ဒီကရီ အပူဒဏ်ကိုနှစ်စဉ်အလူးအလဲခံရတယ်၊၎င်း ကိုသက်သာအောင် အဖျက်သမားတွေကလာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလား?
Air Condition အဲ ကွန်အတွက်လျှပ်စစ်လိုနေပြီ
ကြည့်ရတာ.. မြစ်ဆုံစီမံကိန်းထက်ပိုအရေးကြီးတာတွေလုပ်သွား.. လုပ်နေပြီပဲ..။
by: Mark Canning
တော်တော် သိုင်းဝိုင်းပြီး အကြောင်းအရာစုံ ထောင့်ပေါင်းစုံကနေ တင်ပြနေတာပဲ